K/Simaha Madaxweynaha oo kulan la qaatay ciyaartoy Soomaaliya u mataleysa ciyaaraha caalamiga ah ee Chess-ka | Somchess.net
You are here : Somchess.net » Sawirada » K/Simaha Madaxweynaha oo kulan la qaatay ciyaartoy Soomaaliya u mataleysa ciyaaraha caalamiga ah ee Chess-ka
K/Simaha Madaxweynaha oo kulan la qaatay ciyaartoy Soomaaliya u mataleysa ciyaaraha caalamiga ah ee Chess-ka
Posted On Saturday, August 27, 2016 By admin. Under Sawirada
K/Simaha Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Baarlamaanka Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta kulan gaar ah la yeeshay ciyaartoy Soomaaliya u mataleysa ciyaaraha caalamiga ah ee Chess-ka oo ku sii jeeda magaalada Baku ee dalka azerbaijan.
Kulankaan oo ujeedadiisu ahayd dardaaran K/Simaha uu u jeedinayay wafdiga iyo ciyaartoyda ka socda Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya, ayaa waxaa ugu horeyn halkaasi warbixin uu kaga dhageystay Guddoomiyaha Xiriirka Md. Axmed Cabdi Xasan (Wataac) oo sheegay in ciyaartoyda ka qeyb galeysa tartanka caalamiga ah ay yihiin kuwo dhameystay tababaro dheeraad ah oo maalmahaan u socday.
Waxa uu sheegay Guddoomiyaha Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya Md. Wataac in ciyaartoyda ay yihiin kuwo lagu soo xulay kartidooda ciyaareed isla markaana uu rajeynayo inay guulo la taaban karo ka soo hooyaan tartanka caalamiga ah oo ay ka qeyb gelayaan 190-dal oo caalamka ka socda.
Dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay K/Simaha Madaxweynaha ahna Guddoomiyaha Baarlamaanka Prof. Maxamed Sheekh Jawaari oo uga mahad celiyay qabanqaabada iyo diyaar garowga Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya ugu jiro ka qeyb galka ciyaaraha caalamiga ah, isagoona ku booriyay ciyaartoyda inay muujiyaan karti iyo dadaal dheeraad ah maadaama ay matalayaan Qaranka Soomaaliya.
“Guul ayaan idiin rajeynayaa inaad ka soo hoysaan tartanka caalamiga ah ee ciyaarta Chess-ka, waxaana farxadaasi idinla qeybsanaya dadkiina iyo dalkiina” ayuu yiri Prof. Jawaari oo ciyaartoyda ku wareejiyay calanka Soomaaliya.
Dhinaca kale Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya ayaa soo gabagabeeyay tartamo uu u qabtay ciyaartoyda Chess-ka, kaddib markii ay dhaceen ilaa 6-Round oo laga soo xulay kuwoodii galay kaalimaha ugu horeeya, iyagoona la filayo dalka ka dhoofaan dabayaaqada bishaan iyagoo ku sii jeeda magaalada Baku ee caasimada u ah dalka Aazerbaijan.
« Wataac: “Soomaaliya guul ayay ka rajeyneysaa ciyaaraha Shataranjiga ee ka dhacaya dalka”
Wafdi iyo ciyaartoy ka socota Xiriirka Shataranjiga Somaaliya oo Muqdisho ka ambabaxay »